April 1, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'April 1st, 2017'
Wasiirka Cusub ee Maaliyadda oo Maanta Xilkii lagu Wareejiyay (VIDEO)
April 01, 2017 – Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa saaka ka qeybgalay munaasabad uu xilka kula wareegayay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda, Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, kaas oo xilka kala wareegay Wasiirkii hore ee Wasaarada maaliyada Maxamed Aadan Fargeeti. Ra’iisal Wasaaraha oo munaasabada ka hadlay ayaa u mahadceliyay madaxdii hore …
Wasiirka Cusub ee Maaliyadda (VIDEO)
Ra’iisal Wasaaraha oo munaasabada ka hadlay ayaa u mahadceliyay madaxdii hore ee Wasaaradda Maaliyadda, wuxuuna ammaanay dadaalkoodii iyo heerka ay soo gaarsiiyeen Wasaaradda Maaliyadda oo suurtageliyay in dhismaheedii ay dib ugu shaqo bilowdo burburkii kadib. Wasiika cusub ee maaliyadda oo isagana goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay wasiir fargeeti iyo shaqaalihii la soo shaqeeyay, …
Jadwalka Doorashada Madaxwenaha Maamul Goboleedka Galmudug oo la Shaaciyay (Akhriso)
April 01, 2017 – Waxaa maanta la soo bandhigay jadwelka iyo qaabka loo qabanayo doorashada madaxweynaha cusub ee uu yeelanayo maamulka Galmudug. Hadaba guddiga doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta soo bandhigay jadwalka Doorashada, kaas oo lagu wado in magaalada Cadaado ay ka dhacdo 10-ka bishan April. Baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ku adkeysanaya in doorashada …
Labo Kamid ah Gaangisteriinta Soomaalida ee Super Power oo Maanta Lagu Toogtay Xaafada Islii (VIDEO)
April 01, 2017 – Waxaa maanta xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa ka dhacay arin yaab leh oo ah in dhalinyaro gaangis Soomaali iyo Oromo Isugu jirta lagu toogtay magaalada dhexdeeda. Ciidamada Kenyaatiga ah ee la dagaalama bucadda oo loo yaqaan Flying Squad ee qaabka dharcadka ku hawlgala ayaa bartamaha xaafadda Islii, …
Qaabkii loo Qaarijiyay Gaangiska Islii (VIDEO)
Ciidamada Kenyaatiga ah ee la dagaalama bucadda oo loo yaqaan Flying Squad ee qaabka dharcadka ku hawlgala ayaa bartamaha xaafadda Islii, gaar ahaan wadada u dhaxeysa Suuqa 1-aad ee Islii, suuqyada Amal iyo Taysir ayaa waxa ay ku toogteen labadaasi ruux. Labada ruux ee la toogtay ayaa mid ka mid ah uu ahaa Soomaali halka …